Public Health in Myanmar: အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်လဲ ဖတ်ပါ Menstruation ရာသီ မမှန်ခြင်း
ဆရာ ရာသီမှန်အောင် သန္ဓေတားဆေးကို သောက်ရမှာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဘယ်ရက်ကနေ ဘယ်ဆေးလုံးကို စသောက်ရမှာလည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင်။ တချို့တွေက တားဆေးသောက်နေရင်း ကလေးရှိသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အခက်အခဲမျိုးတွေ မဖြစ်ချင်လို့ပါ။
တားဆေး အမျိုးအစားက ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါ၊ လူတကာသောက်၊ ဈေးလဲ အချိုဆုံး၊ ရှာလို့လဲ အလွယ်ဆုံးဆေးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီစလာတဲ့နေ့ကနေ စသောက်ရပါမယ်။ ပဌမလဆိုရင် ရာသီသွေးရပ်မှ သောက်လဲ ရတယ်။ ဆေးကပ်မှာ အရောင် ၂ မျိုးပါလေ့ရှိတယ်။ ၂၁ လုံးနဲ့ ၇ လုံး။ ၂၁ လုံးပါ ဆေးတွေကနေစပါ။ နောက် အရောင်ရင့်ဆေးတွေ သောက်နေရင်း ရာသီပြန်ဆင်းပါမယ်။ ရက်မှန်သောက်နေရင် ကြားရက်မှာ ရာသီမဆင်းပါ။ ရက်သာမက အချိန်လဲမှန်လေ ကောင်းလေ ဖြစ်တယ်။ မနက်အကျင့် လုပ်သူက မေ့နေလို့ နေ့ခင်းသောက်ရင် ရက်မကျော်စေနိုင်ဘူး။
The combined pill ဆေးနှစ်မျိုးတွဲစားဆေးတွေကို COC လို့လည်းခေါ်တယ်။ Estrogen and Progestogen ခေါ် အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပူးတွဲပါတယ်။ မျိုးဥအိမ်က လစဉ်ထွက်ရမဲ့ မျိုးဥကိုထွက်မလာစေဘို့ တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲရည်ကို ထူပြစ်စေတယ်။ သားအိမ်အတွင်းနံရံကို ပါးလွှာစေတယ်။ စနစ်တကျသုံးရင် ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ သွေးဆင်းရက် မှန်စေတယ်။ ရာသီ မလာမီ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ နည်းစေတယ်။ ဝက်ခြံ၊ အလုံး-အကြိတ်၊ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းနိုင်တယ်။
မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့-အန်၊ ရင်သားတင်းခြင်း၊ ရှားရှားပါးပါး သွေးဖိအားတက်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း။ တချို့က ၀လာတယ်။ တချို့ပိန်တယ်။ တချို့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုရင် မသုံးရပါ။ အသက် ၃၅ ကျော်လျင်၊ အဝလွန်လျင်၊ သွေးခဲတတ်သည့်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်သား-ကင်ဆာ၊ (မိုင်ဂရိန်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊ အသဲ-သဲခြေရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါများ ရှိနေရင် မသုံးသင့်ပါ။
ဆေးသောက်ပါလျက် ကိုယ်ဝန်ရှိတာ အတော်ကြီးနည်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးမှ ဆေးသောက်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီဆေးသောက်တာ ရက်မကျော်ရပါ။ အစပိုင်းလတွေမှာ ကြားရက် သွေးနဲနဲ ဆင်းတာ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ နောက်ဆို မဖြစ်တော့ဘူး။ ဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဟော်မုန်း အနည်းအများက တိုင်းပြည်တခုနဲ့ တခုမှာ မတူကြပါ။
ဆေးက ကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာမှာကိုသာ တားဆီးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာပြီးတာကို သက်ရောက်မှာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေတုံးမှာ ကိုယ်က ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေမှာ ဒါမျိုးလည်းပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်မိရင် အချိုးအဆ ပြောင်းသွားစေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်မရှိမှ အသောက်ခိုင်းတာပါ။ မတော်တဆ သောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်ဝန်-မိခင်ကို ထိခိုက်တာအတွက် သုတေသန လုပ်ထားတာ မတွေ့သေးပါ။
ဆရာရှင့် ကျွန်မက microgynon ED ဆိုတဲ့သန္ဓေတားဆေးသောက်ပါတယ်။ ပြသနာက ကျွန်မက အားဆေးနောက်ဆုံး၂လုံးလောက်သို့ ၁လောက်ကျန်တဲ့အချိန်မှ ရာသီလာပါတယ်။ အဖြူပြန်သောက်ရင်ရာသီမလာဘူးဆိုလို့ ရာသီလာပြီးချိန်ထိစောင့်ပြီးမှ ဆေးအဖြူပြန်သောက်ပါတယ် အဲတာမှန်ပါသလား။ အခု၂လရှိပြီရာင်္သီအလွန်နည်းပါတယ်။ ကျွန်မသားကိုဗိုက်ခွဲပြီးမွေးပါတယ် ၆လရှိပါပြီး နို့မတိုက်တော့ပါ။ (ကိုယ်ဝန်မရှိခင်တုန်းက အဲဆေးသောက်တာ သွေးတိုးဖူးပါတယ်)
Microgynon 30 ED ကိုယ်ဝန်တားဆေး တင်လိုက်ပါပြီ။
ဆရာရှင်းပြတာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ကျမ အန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ဆရာ ဆက်သောက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။
zar kyi said...
ဆရာသမီးအသကိက၂၀ပါ ရာသိမလာတာ၂လကျေ်နေပြီဆရာ သမီးအရမ်းဆိုး၇ိမ်နေတယ် ကန်တော့နော်ဆရာ အဖြူတပတ်လောက်ဆင်းတယ် သမိးကိုအမြန်ဆု့းကူညိပေးပါဆရာဘယ်လိုလုတ်ရမလဲးဆိုတာကိုဆေးတွေလဲးအများကြီးတောက်တယ် ရာသိမလာဘူးဆရာ
To zar kyi
ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ အိမ်ထောင်ရေး-ဆက်ဆံရေး စတာတွေနဲ့အတူ တိုက်ရိုက်မေးပါ။
To may said...
Hepatitis C (စီ) ပိုး http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3077:hepatitis-c-&catid=30:medical-writings-&Itemid=46
Hepatitis C (2) စီ ပိုး နောက်ဆက်တွဲ http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3078:hepatitis-c-&catid=30:medical-writings-&Itemid=46
ဆရာရှင့်...သမီးအသက်၁၇ပါရှင့်။အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီးချင်းပဲ သမီး လက်မောင်းထဲ ထည့်တဲ့
ပစ္စည်းသုံးပါတယ်ရှင့်။၁၁လပိုင်း၆ရက်နေ့ ရောက်တော့ အဲဒါကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။၁၂လပိုင်းမှာ ရာသီမပေါ်တာ ၄ရက်ရောက်လာလို့ အိမ်မှာ ဆီးစစ်ကြည့်တော့ Positiveဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်။၃ခါလုံး ဒီအဖြေပဲ ထွက်ပါတယ်ရှင့်။နောက်၂ပါတ်လည်းရောက်ရော သွေးတွေ အရမ်းဆင်းပါတယ်။ပြီးတော့ လက်ဝါးတစ်ဝက်စာလောက်ရှိတဲ့ သွေးခဲ ရှည်မျောမျောတစ်ခုပါလာပါတယ်။သွေးကြောခရမ်းရောင်အကြောင်းလေးတွေ ပါပါတယ်ရှင့်။ခါးနည်းနည်းကိုက်တာက လွဲလို့ တခြားဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးရှင့်။သွေးဆင်းတာကလည်း ခါတိုင်းလိုပဲ တစ်ပါတ်ပဲ ကြာပါတယ်ရှင့်။အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာပါလားရှင့်။နောက်ထပ်ရော ကိုယ်ဝန်ထပ်ရနိုင်ပါသလားရှင့်။ဘယ်လောက်ကြာမှ ရနိုင်မလဲရှင့်။အသက်အရွယ်နဲ့ သားအိမ်ဆိုင်ပါသလားရှင့်။အခုအရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာအခက်ခဲတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။
I have sex with my gf we were sex foralong time and yesterday she had some blood on hers what is that problem and this case like she lost her virginity please answer if you could
minn myat said...
ဆရာ.. ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား...
အပျိုအမှေးပါး မပေါက်သေးဘဲနဲ့ရော ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား...
သုတ်မထွက်ဘဲ.. အင်္ဂါ၂ခု တစ်ခဏ ထိရုံနဲ့.. အပျိုမှေးလည်း မပေါက်သေးဘဲနဲ့.. ရာသီလာပြီး ၅ရက်အတွင်းလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုရင်... အဲ့လိုခဏထိရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားဆရာ...???
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ...
ကျွှန်တော်နာမည်မိုးစက်ပါ ... ကျွှန်တော်ဇနီးခံစားနေရာတဲ. ဝေဒနာလေး မေးပါရစေ... သူအသက်က ၂၈ နှစ်ပါ ကျွှန်တော်အသက်က ၂၆ နှစ်ပေါ. .. ကျွှန်တော်တို.အိမ်ထောင်ကျတာ ၁ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ .. အခက်အခဲလေးတစ်ခုကြောင်.အတူတူမနေပဲ.တစ်ကွဲတစ်ပျားဆီမှာနေပါတယ် ..ဒါပေမယ်. ၃ ပါတ်မှာ ၁ ရက်တွေ.ပြီး ဟိုတယ် သွားပါတယ် ဆရာ .. ဒါကြောင်.တွေ.တဲ.အခါတိုင်းမှာပဲ ကျွှန်တော်တို. အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်လောက်နေပါတယ် ...ကလေးယူဖို. အစီအစဉ်မရှိသေးလို. သုတ်ရေကိုအပြင်မှာပဲ ထုတ်ပါတယ် ကွန်ဒုံးမသုံးဖြစ်ပါဘူး .. ဒီလိုနေလာတာ ၉ လလောက်ရှိပါပြီး ဆရာ .. အဲဒီလိုနေလာခဲ.တဲ. ၉ လ လုံးလုံးသူရာသီလာတာမှန်တယ် ကျန်းမားရေးကောင်တယ် ဆ၇ာ ... ၁၀ လ ပိုင်းတဲ.ရောက်တော.သူရာသီမလာဘူး ဒါနဲ.ဆီးအကြိမ်ကြိမ်စစ် တော.လဲ ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘူး ... ဒါနဲ. ရာသီ လာအောင်စောင်.ရင်းစောင်.ရင်းနဲ. ၁၂ လ ပိုင်းထိရောက်လာတယ် ( ၁၀ လ ပိုင်း ကနေ ၁၂ လ ပိုင်း ထိ ဟိုတယ် ၁ ခါသွားပြီး ၃ကြိမ်နေဖူးပါတယ် ) ဒါနဲ. ဆရာဝန်နဲ. သွားတွေ. အကျိုးအကြောင်းပြောပြ လို. ဆရာဝန်ကဆေးထိုးပေးလိုက်တယ် .. ဆေးထိုးပေးလိုက်ပြီးလို.နောက် ၁ ပတ်လောက်နေတော. ကျွှန်တော်ဇနီးရာသီလာပါတယ် .. ဒါပေမယ် ဗိုက်အသေနာအောင် ခံစားလိုက် ရရှာတယ် ဆရာ .... ဒါပေမယ် . ၂၀၁၃ နှစ် ၂ လ ပိုင်း ကနေစပြီး သူအဂါံကနေသွေးလေနည်းနည်းလေးဆီထွက်နေတယ် .. အထူးသဖြင်. ကာမစိတ် ကြွာလာတဲ. အခါမျိုး ကျွှန်တော်တို.နှစ်ယောက်ဆက်ဆံတဲ.အခါမျိုး သူဘာသာသူ လက်နဲ.ကလိတဲ.အခါမျိုးတွေမှာသွေးပိုထွတ်တယ် ... ကျွှန်တော်.ဇနီးမှာ သုတ်ရေထွတ်ရမယ်နေရာမှာ သွေးထွတ်နေတာပေါ. ဆရာ ... သွေးက ကာမစိတ်မကြွာတဲ.နေတွေဆို ၂ ရက်မှ တစ်စက်လောက်လေးကျတယ် .. ဒါကြောင်.EVER အမြဲခံထားရတယ် အဲဒီလိုဖြစ်တာ အခုချိန်ထိပဲ ဆရာ ( ၂ လ ကျော် ) .... အဲဒါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော.ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာ.... ကျွှန်တော်တို.ဘာလုပ်သင်.လဲ ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာတွေရှောင်ကြဉ် သင်.လဲ ဘာကြောင်.ဒီလို.ဖြစ်လာရတာလဲ ဆိုတာ တွေကို ဖြေပေးပါလို.အနုအညွန်.တောင်းပန်းအပ်ပါတယ် ဆရာ ....
ဆရာရှင့် သမီက ရာသီလာမမှန်ပါဘူး ပုံမှန်ဆို ၂၇ ရက် ၂၈ ဆို ရာသီလာပါတယ်. အခု ဆယ်ရက်ကျော်ပြီ မလာဘူး ဆရာ ဘာဆေးတွေသောက်ရမလဲဆရာ။သမီးအသက် ၂၀ ရှိပါပြီဆရာ. သမီးမှာ ခြေထောက် ကိုက်တက်တဲ့ရောဂါတော့ရှိပါတယ် ဆရာ အဲ့ဒီအတွက် paracetamol 500 mg ကို့နေ့တိုင်းလိုလို သောက်ရပါတယ်.ခြေထောက် တဖက်ပဲကိုက်တာပါ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ ခုနောက်ပိုင်းက နေ့တိုင်းလို ကိုက်လို့ ပါရာ သောက်နေရပါတယ် . ရာသီမလာတာ ပါရာ နေ့တိုင်းသောက်သာနဲ့ ဆိုင်လားဆရာ. ဆေး နေ့တိုင်းရောသောက်သင့်ပါသလားဆရာ..ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင့်
myan mar said...
ဆရာရှင့်သမီးအသက်24နှစ်ပါသားသမီးမရှိပါပဲရင်သားမှနို့ ရည်ထွက်နေပါတယ်ဆရာရင်သားကင်ဆာနဲ့ ပတ်သတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားရာသီလည်းပုံမှန်မလာပါဘူးလာခဲ့ရင်လည်းအလွန်နည်းပါတယ်ရာသီလာချိန်မဲမဲအဖတ်များဆင်းလာတတ်ပါတယ်ဆရာမိန်းမကိုယ်မှလဲစပ်ပါတယ်သားအိမ်ကင်ဆာနဲ့ ရောဆက်စပ်မှူရှိပါသလားဆရာရှင်းပြပေးပါ
rap.pappper lay said...
ဆရာခင် ဗျာ ကျွှန်တော်အ ဖေ ကအသက်(55) ပါ အခုဆီးကြိတ်ရောင်ရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ် တခြားရောဂါတော့မရှိပါဘူးpolo ဆေးခန်းမှာ(1)လပြခဲ့ပါတယ် မသက်သာလို့ ဘာဆေးသောက်သင့်တယ် ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကို ရှင်ပြပေးပါဆရာ လေးစားစွာဖြင့်မိုးသောက်ကြယ်
Yin Thu Aye said...
ဆရာရှင့် သမီးက ရာသီလာတာမမှန်တာ ၇လလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ရက်၄၀လောက်မှတခါလာတယ်။ လာရင်လည်းအရင်လို ၅ရက်ဟုတ်ဘူး။ ၂ရက်ဘဲလာပါတော့တယ်။ မျက်နှာမှာလည်း ၀က်ခြံလို ဖုသေးသေးလေးတွေ တစ်မျက်နှာလုံး ပေါက်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲ ရှင့် ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု အကြံလေးပေးပါ
မျက်နှာအတွက်ရော ဓမ္မတာ အတွက်ရော ရှင့်။....
Pinky Kitty said...
cute moon said...
Aung Htet Kyaw said...
wine chit said...
ဆရာရှင့် ရာသီလာတာအမြဲနောက်ဆုတ်ဆုတ်သွားပါတယ် အိမ်ထောင်သည်ပါ ဘာဆေးမှမသုံးပါဘူးရှင့် နှစ်ရက်လောက်ပဲလာပါတယ် ရောဂါတခုခုများဖြစ်ချင်လို့မလားမသိဘူး အကြံပြုပေးပါရှင်
Soe Thu Lwin said...
ရာသိလာမဲ့​နေကိုမသိဘဲဆက်​ဆံတာ ​ဆေး​တော့​သောက်​တယ့်​ ခုထရာသိမလာဘူး ကိုယ့်​ဝန်​ရနိူင်​လား သတိထားမိတာကဆက်​ဆံတာ​သွေးနည်းနည်းပါလို့ပါ ခုထိမလာ​သေးပါ တလပြည့်​​တော့မည့်​​ဖြေ​ပေးပါ